ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၁)
ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၁)
Posted by Diamond Key on Oct 27, 2011 in Photography | 28 comments
စိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်စု စိန်သော့ရဲ့ ရိုက်ချက်
စိန်သော့က ဓါတ်ပုံဝါသနာပါတယ်။ ကင်မရာ တစ်လုံးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်နေရရင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ပါပဲ။ Hobby လို့ဖြေရတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ပြောခဲ့တာက ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း နဲ့ စာဖတ်ခြင်းတွေကိုပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အချိန်ကုန်နေမှန်းမသိတဲ့ စိန်သော့၊ အသိပညာသာ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေရမယ်ဆိုရင် ထမင်းဟင်းမေ့တတ်တဲ့ စိန်သော့ကို nozomi က “ ဓါတ်ပုံကို ဘာမှ မရိုက်တတ်တဲ့သူတစ်ဦးအတွက် ဓါတ်ပုံပညာကို အခြေခံကနေစပြီး ပို့စ် (တစ်ခုနှစ်ခုလောက် မဟုတ်ပဲ) တွေနဲ့ တဆင့်ချင်း ပုံမှန် ရှင်းပြပေးပါလား ” လို့ ပြင်ဦးလွင်ပုံလေးတွေ တင်တုန်းကပြောလာတော့ “ ကြိုးစားပြီး မကြာတဲ့ တစ်ချိန်ကျရင် ဖြစ်အောင်တင်ပါ့မယ်” လို့ ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကတိဆိုတာက ပြောပြီးရင် တည်ရမှာမို့ “ ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ စရေးဖြစ်ပါတော့မယ်။
ပညာရပ်တစ်ခုကို ရေးတာဖြစ်ပေမယ့် ပညာပြည့်ဝနေတဲ့ ပညာရှင် မဟုတ်တာမို့ ကိုယ်သိထားသလောက်ကို ဗဟုသုတအဖြစ် ကျိုးစားပြီး ရွှာထဲက ဓါတ်ပုံရိုက်ကြသူတွေအတွက် မျှဝေပါ့မယ်။ “ ဖတ်မယ့်သူတွေ ပေးရတဲ့ အချိန်အတွက် တန်ဖိုးမမဲ့စေဖို့ “ နဲ့ အခြေခံလေးတွေကနေ အဆင့်မြင့်ပညာတွေ ဆက်လေ့လာနိုင်အောင် အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့် ဖြစ်စေဖို့ကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားတင်ပြပါမယ်။
စိန်သော့တို့တွေက ခရီးတွေ သွားတဲ့အခါ၊ ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖို့က အရမ်းလွယ်ကူလာပါတယ်။ စိန်သော့တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို camera တွေရှားခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်လို့ရတဲ့ Phone camera ၊ MP4 camera ၊ Digital camera လေးတွေက ဓါတ်ပုံပညာ အခြေခံမရှိလည်း Auto (Focus ၊ Exposure) တွေမို့ ပုံကောင်းလေးတွေ ရိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
စိန်သော့ အခုတင်မယ့် ရှင်းပြချက်လေးတွေက nozomi အကြံပေးခဲ့သလို ဓါတ်ပုံကို ဘာမှ မရိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ၊ (ဓါတ်ပုံပညာ လုံးဝ အခြေခံ မရှိသူတွေ အတွက်) ဓါတ်ပုံပညာ အခြေခံ ဗဟုသုတလေးတွေမို့ ရိုက်တတ်ပြီးသား သူတွေအတွက်တော့ မလိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ပုံပညာ လုံးဝအခြေခံ မရှိသေးသူတွေကိုသာ ဦးတည်တာမို့ ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာအချက်တွေ မပြောခင် ဓါတ်ပုံပညာရပ်မှာ သိထားသင့်တာလေးတွေ အရင်ပြောပါမယ်။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ၊ ဓါတ်ပုံပညာရပ် မှာက အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာနဲ့ အနုပညာရပ်ပါ။ ဓါတ်ပုံ (ဓါတ်ပုံပညာ) = သိပ္ပံပညာ + အနုပညာ ပေါ့။ သိပ္ပံပညာ အပိုင်းမှာဆိုရင် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ (ကင်မရာတစ်လုံး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ နှင့် ပါဝင်မှုများ) ၊ ရူပဗေဒ (အလင်း၊ အရောင်၊ လျှပ်စစ်၊ မှန်ဘီလူး၊ ….)၊ ဓာတုဗေဒ (ပုံကူး၊ ပုံဖေါ်မှု ဆိုင်ရာ)၊ သင်္ချာပညာ (တွက်ချက်ရိုက်ကူးမှု) စတဲ့ အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပြီး ၊ အနုပညာ အပိုင်းမှာ composition ပုံတစ်ပုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ (ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံမှာ ပုံထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အရာတွေ၊ လူ၊ သစ်ပင်၊ အိမ်၊ လှေ အစရှိတာမျိုးတွေကို ပုံရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာ ရှိနေစေဖို့ ဆိုတဲ့ အနုပညာမြောက်တဲ့ စိတ်ကူးတွေ)၊ အလင်းအမှောင်၊ အနုအရင့်၊ အနီးအဝေး အစရှိတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ရင် –
–	ရိုးရိုးမှတ်တမ်းပုံ (တွေ့နေတဲ့ အတိုင်း ကြုံသလို ပုံမှန်ပဲ ရိုက်လိုက်တာ)
–	အနုပညာဆန်တဲ့ မှတ်တမ်းပုံ (အနုပညာ အခြေခံလေး၊ အနုပညာ စိတ်ကူးလေး ထည့်ရိုက်တာ၊ ရိုက်ရမဲ့ ပုံအတွက် ကိုယ်ပြလိုရာအချက်ကို ပေါ်လွင်စေဖို့ အလင်းအမှောင်၊ အရောင်၊ မြင်ကွင်းနေရာ က ရွေးချယ်ရိုက်တာ)
–	ဓါတ်ပုံအနုပညာမြောက်ပုံ ( ဓါတ်ပုံပညာ + အနုပညာ ပါသောပုံ) ဆိုပြီး အကြမ်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်နှစ်ချက်က ဓါတ်ပုံပညာ လုံးဝသိစရာ မလိုတဲ့ (တစ်ချိုးဆိုရင် တစ်ကယ်မွေးရာပါ ဗီဇကိုကပါလာတာ )၊ အချက်တွေဖြစ်ကာ ဓါတ်ပုံအနုပညာမြောက်ပုံ အတွက်သာ ဓါတ်ပုံပညာ သိဖို့လိုတာဖြစ်ပြီး အဲဒီသုံးချက်စလုံးက ဘယ်လိုကင်မရာနဲ့ပဲ ရိုက်ရိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ (တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကင်မရာနဲ့မှ မဟုတ်ပါ)။
ဒီနေရာမှာ ဓါတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံကို ဘယ်လိုရွှေးချယ်တာလဲဆိုတာ ပြောပါမယ်။ ပုံကောင်းတစ်ပုံ ဆိုတာကို ဓါတ်ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ဓါတ်ပုံရဲ့ အလင်းရောင် ပေးစနစ်နဲ့ အလင်းပေးအယူအဆ၊ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ composition လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှု၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ် စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
အခုပထမ စပြောလိုတဲ့အချက်က ရိုက်ကူးတင်ပြပုံ အခြေခံလေးတွေပါ။ (ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ နောက်မှ အသေးစိတ် ပြောပါမယ်။) ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်တဲ့ အခါ သာမန်မြင်ကွင်းအတိုင်းပဲ ရိုက်လို့ရသလို အယူအဆလေး၊ အနုပညာမြောက်တဲ့ အိုင်ဒီယာလေးနဲ့ နဲနဲလေး မြင်ကွင်းပြောင်းပြီးလဲ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာပြရရင် အောက်က ပုံလေးနှစ်ပုံကို ကြည့်ပါ။
တောင်သမန်က လှေကလေးတွေ စီးမယ့်သူကို စောင့်ကာနေ
ဓါတ်ပုံမှာ ပြချင်တဲ့ တစ်နေရာတည်းက လှေကလေးတွေကိုပဲ ခြေလှမ်းလေးနဲနဲပြောင်းကာ ပြချက်မြင်ကွင်း နှစ်မျိုးနဲ့ ရိုက်ပြထားပါတယ်။ တစ်ပုံက ပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ရိုးရိုးလေး ရိုက်ပြချက်နဲ့ နောက်တစ်ပုံက ပုံမှာဟာနေတဲ့ နေရာလပ် မရှိလေအောင် အဖြည့်လေးတွေနဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ ( ပုံတစ်ပုံရဲ့ foreground နဲ့ background ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမှာ အသေးစိတ်ပြန်ရေးပါမယ်)။
နောက်တစ်ခုက လူတိုင်း ပုံမှန်မြင်တွေ့နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိုပဲ အမြင်ဆန်း စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ပြတာပါ။ ပုံမှန် လူတွေရဲ့ အရပ်က ၄ ပေ ကနေ ၆ ပေပဲဆိုပါတော့။ ဒီတော့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ eye level (မျက်စိနဲ့ တတန်းတည်း) ကနေပဲ ပုံမှန်မြင်ကွင်းတွေကို နေ့စဉ် တွေ့နေကြတာပါ။ ဒီတော့ အဲဒါထက်မြင့်တဲ့နေရာ၊ ဒါမှမဟုတ် နိမ့်တဲ့နေရာကနေ ရိုက်ကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ တွေ့ရရင် ပုံမှန်ထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံပညာမှာတော့ bird eye’s view (အပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့ အမြင်) ၊ worm’s eye view (တီကောင်ရဲ့ မြင်ကွင်း)(အောက်ကနေ မော့်ကြည့်ရတဲ့ အမြင်) လို့ခေါ်ပါတယ်။)
တောင်တမန်က ဦးပိန်တံတားကို ကြမ်းပြင်မှာ ကင်မရာချရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးပါ။
တောင်တမန်က ဦးပိန်တံတားက ထိုင်မယ့်သူ စောင့်နေတဲ့ ခုံလေးတွေ
အောက်ကပုံလေးတွေက တံတားပေါ်ကနေ အောက်ကို ငုံကြည့်ပြီး ရိုက်လာတာပါ။
ပုံလေးတွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေတဲ့ နောက်တစ်ချက်က ဘောင်ခတ်ခြင်းပါ။ သဘာဝလောကကြီးထဲမှာ ပုံမှန်ပဲ မြင်တွေနေရတဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးတွေကို ဓါတ်ပုံမှာ လေးဖက်ဘောင်ခတ် နေရာလေးသတ်မှတ်ပြီး ပြလိုက်တော့ ကြည့်ရသူတွေ အတွက် တစ်မျိုးဆန်းကာ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အောက်က ပုံလေးက အပြင်လောက ပုံမှန်မြင်နေကျကို သစ်ပင်အကိုင်းကြားက ရိုက်ပြထားတာပါ။
ဒီအောက်ပုံလေးက ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ ဗိုက်အောက် (လက်နဲ့ ခြေထောက်ကြား) ကနေ မလှမ်းမကမ်းက ဘုရားတစ်ဆူကို ရိုက်ထားတာပါ။
ဒီပုံလေးက တံတားတိုင်လုံးနှစ်ခုကြားကနေမြင်နေရတဲ့ ရေထဲက ကလေးငယ်ပါ။ သာမန်ရိုးရှင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးကို ဆန်းသွားအောင် ဘောင်လေးယူလိုက်တာပါ။
ဓါတ်ပုံဆိုတာက အလင်းနဲ့ (စာ) ရေးခြင်းလို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Photography = Photos (Light) + Graphein (Writing or Drawing) လို့ ဂရိဘာသာစကား အရ ဆိုတာပါ။ ဒီတော့ ပုံတစ်ပုံ ကောင်းဖို့ အဓိက အရေးပါနေတာက အလင်းပါ။ (အသေးစိတ်ကို lighting ကဏ္ဍမှာ ရေးပါမယ်)။ အလင်းကိုလည်း ဖြစ်သလိုမရိုက်ပဲ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်၊ အပေါ် နဲ့ စောင်းစောင်းကျနေအောင် ပုံမှာ လိုသလို ကိုယ်ပြလိုတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်ပေါ်အောင် ရယူနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ခါက စိန်သော့ရဲ့ ဆရာမတစ်ဦးက ခရီးတစ်ခုမှာ သူသုံးနေတဲ့ အပျော်တန်းကင်မရာ အသေးလေးနဲ့ သူမိသားစု ခရီးသွားမှတ်တမ်းပုံလေးတွေကို ခရီးတစ်လျှောက်မှာ ရိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ပုံလေးတွေ ကူးပြီးတော့ ဆရာမက သူကင်မရာကို ဈေးပေါလို့ ပုံကောင်းမရဘူးလို့ အရင်က ထင်နေခဲ့ကြောင်း၊ စိန်သော့ ရိုက်ပေးတဲ့ ပုံတွေက သူ့ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ဖူးသမျှတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူကင်မရာက ဒီလိုပုံလေးတွေ ရိုက်နိုင်တာသိရကြောင်း ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူကင်မရာက အမှန်တကယ်ကလည်း ခလုပ်နိုပ်ရုံသာရတဲ့ Fixed Focus (Auto focus ထက်နိမ့်) ပါ။ စိန်သော့က ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့အခါ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ရိုက်မဲ့ ပုံလေးတွေ အတွက် အနီးအဝေး မြင်ကွင်းယူတာ၊ lighting အလင်းအမှောင် ကောင်းအောင်ယူတာ၊ အရောင်လိုက်ဖက်တဲ့ နေရာလေးတွေကနေသာ ရိုက်ခဲ့တာပါ။
ဒါလေးတွေ အားလုံးခြုံလိုက်ရရင် စိတ်ဝင်စားစရာ ဓါတ်ပုံလေးတွေ၊ အနုပညာမြောက်ဓါတ်ပုံလေးတွေ အတွက်က ဘယ်ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ရိုက်ပါ။ အကောင်းစား ကင်မရာ သုံးပါမှ ပုံကောင်းများရတာ မဟုတ်ကြောင်းပါ။ စိန်သော့အရှေ့မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေမှာ သုံးခဲ့တဲ့ အချို့ပုံလေးတွေဆိုရင် phone နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပါခဲ့ပါတယ်။
(ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၂) ဆီ…..ဆက်ပါအုံးမယ်။ ကို Inz@ghi ၊ ကိုပေါက်၊ ကိုချို ၊ ကိုဘလက် အပါအဝင် အားလုံးသော ရွာထဲက ကိုကို၊ မမ (တစ်ကယ့် မမ အပါအဝင်၊ သူက လည်း စိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်စုတွေ ရေးဖြစ်အောင် တွန်းတဲ့ အထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်မို့ပါ) cameraman တွေက ဝိုင်းပြီး ဖြည့်ပေးကြစေလိုပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကို စိတ်ဝင်စားသူ ရွာသူရွာသားများ အားလုံး ပါဝင် ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ (ရိုက်ရာ) မှာကြုံခဲ့ဖူးတာ၊ သိလိုတာလေးတွေ ရှိရင်လည်း မေးပါ။ သိသလောက်တော့ ကြိုးစားပြီး ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်။ ရွာထဲမှာ Manual/ SLR ကင်မရာပြောင်း ကိုင်တော့မှာမို့ အဘကို ပစ်မထားကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ Foreign Resident တို့၊ nozomi တို့တွေလည်း တစ်စုံတရာ အရင်လေ့လာစရာ ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ပါ။ စိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်စုတွေဆီကနေ ရွာသူရွာသားတွေ အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ဗဟုသုတလေး ပါတယ်ဆိုရင်ပဲ သူကြီးဆာဗာမှာ နေရာကျပ်အောင် လုပ်နေရတာကို စိန်သော့ မျက်နာမပူရမှာပါ။ အားပေးသူရှိနေသရွှေ့တော့ သူကြီးဆာဗာကို ဆက်ကာ ဒုက္ခပေးနေပါအုံးမယ်။ ခွင့်လွတ်နော် သူကြီးရေ)း)
ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ရိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့ ကိုစိန်သော့စာဖတ်ပြီး
အားတက်ရပါတယ်။ ဖြေးဖြေးမှ သိချင်တာလေးတွေ ပြန်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
တစ်စုံတစ်ရာ မဟုတ်ဘူး တော်တော်ကို အကျိုးရှိပါတယ်
အရင်ဆုံး ကိုယ့်အချိန်ထဲက ပေးပြီး ပညာတွေ မျှဝေပေးတဲ့ ကိုစိန်သော့ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အခု ပို့စ်ကိုလဲ ဖတ်သွားတယ် ကူးလဲ ထားလိုက်ပါတယ် နောက် အချိန်ယူပြီး ထပ်ဖတ်ချင်သေးလို့ပါ
နောက်ပို့စ် တွေအတွက်လဲ ကြိုတင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်
ပို့စ်တွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ လက်တွေ့ ရိုက်ရင်းနဲ့မှ သိချင်တာလေးတွေ ထပ်မေးပါဦးမယ်
ွှစိတ်ဝင်တစားရှိတာ၊ ဆွေးနွေးလာမှာတွေကိုအတွက် ကြိူနေပါတယ် ကိုဘလက်၊ ကိုချို၊ ကိုနိုတို့ ခင်ဗျာ။
ကျနော်ကတော့ဝါသနာရှင်ပါပဲဗျာဆရာသော့ယူဆချက်များသဘောကျလက်ခံပါတယ်ဓတ်ပုံဆိုတာမျိုးကလဲ လေ့လာလို့မကုန်နိုင်တဲ့ပညာရပ်ပါပဲဗျာ ကမ်မရာထဲမှာပါတဲ့ ဖန်ရှင်ကိုပဲ သုံးတတ်ရင်မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် သူများရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရတာ ပိုသဘောကျပါတယ် သဘာဝရှူခင်းတွေကိုတော့ပိုကြိုက်ပါတယ် ကျနော့ထက်ပြောတတ်တဲ့လူတွေရှိနေမှကျနော်ကနားထောင်တာပိုအရသာရှိတာပေါ့ဗျာ တခါတုံးကတော့ (ဂျပန်မှာရှိစဉ်) သံရုံးကိုထမင်းစားဖိတ်လို့ သွားရင်းနဲ့ပေါ့ သံအမတ်ကြီး မိသားစုရော သံအမတ်ကြီးနဲ့ဇနီး စုံတွဲပုံလေးရိုက်ပေးတာ သဘောကျလို့ပုံကြီးချဲ့ပြီး နံရံမှာဓတ်ပုံအဟောင်းနဲ့ပြောင်းပြီး ချိတ်ဆွဲ ခဲ့တာလေးတော့မှတ်မိခဲ့ပါတယ်(ဪ ကိုယ်ရိုက်တာလေး အသိအမှတ်ပြုခံရလို့ဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့ဗျာ) အခုတော့ ဓတ်ပုံထက် တာဝန်ဝတ်တရားတွေက ဘီးစီးနေလို့ အားတဲ့အချိန်လေးပဲ
လေ့လာရတာပေါ့ဗျာhttp://myanmarlensman.com/ မှာလဲမြန်မာလူမျိုးများရဲ့ အရည်အသွေးများကိုလဲလေ့လာလို့ ကောင်းပါတယ်http://www.facebook.com/photo.php?fbid=153082004777458&set=a.102823733136619.5734.100002269781885&type=1&theater မှာတော့ ဒုတိယဆု ဒတ်ပုံလေးကိုရွာသားများအား တလက်ဆနဲ့ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ လေးစားလျှက်အားပေးလျှက် ရှိကြောင်း
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=153082004777458&set=a.102823733136619.5734.100002269781885&type=1&theater မြန်မာပညာရှင်များ၏ ဓတ်ပုံများလေ့လာနိုင်ပါကြောင်း(မသိသေးသူများအတွက်သာ)
ကိုချိုဆိုတာ ဓါတ်ပုံဆရာ ညောင်ဦးဖိုးချိုများဖြစ်နေမလား??????
မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ကျနော်ကဝါသနာရှင် အဆင့်ပါဗျာ
DSLR ကချက်ချင်းကြီးတော့ ၀ယ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးပါဘူး ။
အခြေခံပညာလောက်တော့ အရင်လေ့လာရဦး မယ် ။
နဲနဲ တတ်လာမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမျိုးအစားတို့ ဘာတို့ရွေးနိုင်မှာလေ ။
အခုလောလောဆယ်တော့ DSLR တွေ လေးတာတစ်ခုပဲသိသေးတယ် ။
တစ်နှစ်လောက် တော့လေ့လာရဦးမယ် ။
ကျနော် လည်းတတ်နိုင်တာရှိရင် ကူပါ့မယ် ဗျ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရေးပြီး.ပုံတွေနဲ့ တွဲရှင်းထားတာ.ကျွန်တော်.လိုဓါတ်ပုံ အမြင်မရှိသော
နားလည်အောင်ထပ်တလဲလဲ ဖတ်ပြီး နောက်.တဆင့် (ပို့စ်) အတွက်လည်း အသင့်ပြင်ထားပါမယ်ခင်ဗျာ…..
ရွာထဲမှာ ……………. လာထား။။
ပညာကို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း စိတ်ဝင်စားအားပေးပါတယ်။ သဂျီးကောင်းမှုနဲ့ စာရေးခြင်းအမှုကို (အရင်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် စာရေးဖြစ်မယ်လို့ လုံးဝ ထင်မထားရာကနေ) လက်စမ်းခွင့်ရလို့ ရွာထဲမှာ နေပျော်လာရာကနေ မဝေတို့၊ ကိုပေါက်တို့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး (တခါက လွင်မိုးက ဇာတ်ကားတစ်ခုမှာ ပြောဖူးတယ် ဓာတ်ပုံရိုက်တာ အန်ကယ် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို အသေမှတ်ပြီး) နဂိုဝါသနာအခံနဲ့ ပုံတွေတင်ဖြစ်တာ ။ ကွန်ပြူတာမှာ မူကြို၊ ဓာတ်ပုံမှာ ၀ လုံးတန်း ဘ၀မို့ သစ်မင်းတို့၊ ဆြာသော့တို့၊ အင်ဇာဂီတို့ရဲ့ စာတွေဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ တိုးပွားရပါတယ်။
Very Nice! Grand Calendar Level ဓာက်ပုံတွေဘဲဗျာ။
အခုမှ ဒီပို့ စ်ကို ကြည့်ဖြစ်တော့
အရင်က ဘာလို့ မတွေ့ ခဲ့ပါလိမ့် လို့ 
ကိုစိန်သော့ကြီး ဓါတ်ပုံရိုက်သွားရင် ခေါ်ပါဦးဗျို့ 
လိုက်ပညာယူ ရအောင်လို့ ပါ
အမြဲတမ်း welcome ပါကိုပေရာ။
Thanks alot !ဆက်ရေးဖြစ်အောင်ရေးပါ
ဒီရက်ပိုင်းလေး အလုပ်နဲနဲများနေလို့ပါ။ ဆက်ပါမယ်။ အားပေးနေသူတွေ အားလုံးကို လေးစားလျှက် –
ကိုစိန်သော့ရဲ့ အရေးရော အရိုက်ပါ ကောင်းလွန်းလို့ ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ အနုပညာမြောက်တယ်။ လွဲနေတာလေး တခုတော့ ပြင်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမှာမို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံမှာ အပေါ်စီး အမြင့်က ရိုက်တာကို bird’s eye view လို့ ခေါ်ပေမဲ့ အောက်ဖက်ကပင့်ပြီး အနိမ့်ရိုက်တာကိုတော့ worm’s eye view (တီကောင်ရဲ့ မြင်ကွင်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Fisheye ဆိုတာက အလွန်တရာ မြင်ကွင်းကျယ်တဲ့ မှန်ဘီလူးကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးက ငါးမျက်လုံးလို အပြင်ကို ပြူးထွက်နေပြီး မြင်ကွင်းကျယ်လွန်းလို့ ဘေးပတ်လည်က တိုင်လုံးတွေ သစ်ပင်တွေ အလယ်ကို ကွေးဝင်နေသလို မြင်ရတာမျိုးပေါ့။ ကိုစိန်သော့ရဲ့ ပညာပေး ဆောင်းပါးမှာ ပြင်ပေးလိုက်ရင် စာဖတ်သူတွေ အကျိုးရှိမှာပါ။ ဆက်ပြီး ရေးသွားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဆသော့ ငါးမျက်စိ ကိုမှားရေးထားတာ အမြင်သျှမ်းသွားတယ်ဗျ…
ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုမိုဂျိုရေ…
ငါးမျက်စိတပ်ရိုက်ရင်ကိုပဲ …high angle နဲ့ low angleမှာ
(ဆြာ့ စကားအရဆိုရင်တော့ ငှက်နဲ့တီကောင်ပေါ့ဗျာ..)
ငှက် လိုရိုက်ရင် ဂငယ်ပုံကွေးပီး
တီ လိုရိုက်ရင်တော့ ပစောက်ပုံကွေးကြောင်းပါ ….
ဆရာမိုရေ၊ ကျေးဇူးပါဗျာ။ ပြင်လိုက်ပါမယ်။ဂငယ်ကွေးနဲ့ ပစောက်ပုံကွေးအတွက်ကတော့ ကိုဇာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နံပါတ် (၃) ကိုဖတ်ပြီးမှ နံပါတ် ၁ နဲ့ ၂ ကို ရှာ ဖတ်ရတော့တယ်။ တော်ရုံ လူ မလုပ်ချင် သို့ . မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာပါ။ အချိန်ပေး ပြီး စာစီတာ၊ ရှင်းပြတာ တစ်ခု နဲ့ တင် တော်တော် ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းနေပါပြီ။
တောင်သမန် ကို မရောက်ရောက် အောင် လာခဲ့ ဦးမယ် ဗျာ။.. အဲ့ သစ်ပင်ကို ရိုက်ချင်လို့ … ပစောက် ကွေး နဲ့ ဂငယ် ကွေး .. အတွက် . လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ။
ခုမှ ဓါတ်ပုံပညာမှတ်စု (၃) ကိုတွေ့လို့ အမှတ်စဉ်(၁)ကနေ စဖတ်တာပါ။ ဝါသနာပါသူတွေအတွက် အလွန်အဖိုးတန်သော မုတ်စုပါပဲရှင်။
M-Lulin နဲ့ အေမီရေ၊ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ဆက်လဲ အားပေးပေါ့။
ဦးမှော်ဆရာ ပြောပြလို့ ဆရာစိန်သော့ရဲ့  ဒီပိုစ့်ကို စဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
(၂) (၃)နဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ဆက်ဖက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ
၀ါသနာနဲ့ အစပျိုးလေ့လာသူတွေအတွက် ဒီပိုစ့်က အထောက်အကူအရမ်းပြုပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီပိုစ့်မှာ ပုံတွေ မမြင်ရတော့ဘူး..ပုံလေးနဲ့တွဲကြည့်ချင်ပါတယ်။